Kuvunyelwe ukwenza lokho engikwazi ukuyenza kahle, ngisho noma abanye asilahle? Impendulo khona in the movie "School of Rock", abadlali, indima kanye esiqintini iluphi okuzoxoxwa ngalo ngezansi.
Nge isiphetho ukuphila
Dewey Finn - guy otvyazny ochitha isikhathi sakhe esiningi ezinikezela umculo. ubizo lakhe - kungcono idwala, futhi iphupho lakhe - ukudlala esiteji enkulu phambi ezinkulungwane zabalandeli. Waze wangqongqoza ndawonye iqembu futhi uthenge impahla edingekayo. Kodwa ukuze ube ethandwa liyabonakala, kubalulekile ukuqala ukuze uwine umncintiswano yaminyaka yonke rock bands. Inkinga nje wukuthi band sakhe enqaba ukubambisana Dewey.
Kodwa izinkinga abagcini lapho. Guy ugijima ingozi ngokushesha ngokulahlekelwa nophahla phezu kwekhanda lakho, uma ungazitholi, kuka ukukhokhela egumbini. Ngakho wanquma esenzweni yenza ngokuphelelwa yithemba. Lapho ahlala naye sakhe ababemenyelwe esikhundleni uthisha ogulayo esikoleni sendawo, Dewey uya ukusebenza esikhundleni sakhe. Yiqiniso, akunakwenzeka ukuba sikwazi ukunikeza ulwazi oludingekayo a ibanga lesihlanu, lwezifundo yibhange. Kodwa mhlawumbe, uHorace Green Elementary School - ithuba lakhe lokugcina ukufeza iphupho impilo yonke.
"Isikole Edwaleni": abadlali nezinhlamvu
"Green Elementary School" kuyaphawuleka ngoba, ngaphezu imithetho jikelele yokutholwa kuzo zonke izikhungo zemfundo, lapho khona baneHholo imithetho ngabanye neziqondiso. Ngo uthisha ezifana esikoleni ukufundisa kuphela izincomo best. Dewey uFinn, eyadlalwa ifilimu ( "School of Rock") Dzhek Blek, lapho nje akunjalo. Kepha lapho, sibonga uthishanhloko.
URosalind Mullins (Dzhoan Kyusak) - abesifazane banesibopho futhi sina. Phatha isikole ufake kungelona ize. Isiko le ndawo yakhe into ebaluleke kakhulu ukuba singawanyathela yena ngeke avumele noma ubani, ngoba lesi sici, futhi abazali bakhokhe imali eningi. Yiqiniso, futhi indoda, futhi ngemva ambalwa izingilazi ubhiya Miss Mullins ivumela yena ukuze uphumule. Kodwa ngakolunye izinsuku yena Rigor nokunakekela. Akucaci isizathu sokubulawa kwakhe kokuchitha interview, akazange aqaphele KOKUCIJILE OKUBHEKE PHEZULU ezifana Dewey uFinn.
Futhi lokho Shnibli Ned, eyadlalwa Mayk Uayt? Uma ngikhuluma iqiniso, kwaba iphutha lakhe ukuthi walahlekelwa itoho. Ngabona nabo efanayo ezama ngempela azikwazanga ukulinda isikweletu egameni labo. Phela, ngaphambi guys ekwenzeni umculo ndawonye. Manje sidinga imali, sengathi bangabafokazi.
Nakuba kungaqondakala, nsizwa kakhulu uyayazisa ubuhlobo nentombi yakhe, Patty De Marco (Sarah Silverman). Kodwa ngeke bajabule kuze Dewey iqala nabo ukukhokhela izindlu. Ned ayithandi ukuba aqhubeke ekhumbuza mayelana imali, kodwa Patty ucindezela kanzima naye. Kazi kufanele balinde isikhathi esingakanani banayo uthando olunjalo?
"Isikole Edwaleni" ifilimu abadlali of Ensemble zezingane
Ukuze singene Isikole esidumile Horace Green Elementary School, udinga ukwenza isimo esisodwa kuphela - njalo ukhokhele yesikole. Ngakho izingane wakhe bayaya ulwazi ngendlela ehluke ngokuphelele futhi eziyisisekelo zabo yokwamukelwa akuphazamisi. Lapha, njengoba esikoleni evamile, abanye abafundi obala ukubhikisha ngokumelene ukuqeqeshwa, kuyilapho abanye nje othanda ukukwenza, kanti abanye nje sengathi zisuthe, kodwa futhi kungesemehlweni abazali ukunikela sonke isikhathi sakhe ukuze umsebenzi wakhe ozithandayo. Kodwa kukhona into kubahlanganisa - bangabaphingi bonke abantu zokudala. Ngokwezwi nezwi igama elithi ngosuku lwesibili ka futhi ngathola Dewey uFinn.
Kuyinto ngalezi zingane wabona ukusebenza iphupho lakhe zaziswe. Ekilasini umculo wabona keyboardist omkhulu Lawrence (Robert Tsai), ezithembisa guitarist Zack (Jay Geydos), bass guitarist Katie (Rebecca Braun), sikhulumi uFreddy (Kevin Aleksandr Klark) kanye vocalists ezintathu: Tomiko, uMarta Alice (Mariam Hassan Keytlin Heyl futhi Aleysha Allen). Futhi ake up, badlala umculo we-classic, akukho okungabavimba ekubeni rock. By the way, kufanele kube nomona ngamakhono lwenhlangano Dewey uFinn, ngoba umsebenzi ayengawathola kulo lonke ibanga lesihlanu.
Ngakolunye uhlangothi i-movie "School of Rock" - kuyinto indlela ziningi futhi zaba nzima kwi-ezithandwayo zezingoma iphupho enikelwe fan of rock hhayi kuphela. Lena indaba lapho echaza ukuthi yena, njengoba uthisha, lalingaba nokuthile nomthelela omuhle ezigcemeni zabo. Wabasiza anqobe ukungabaza futhi wenze ukukhetha kwakho, naphezu mthetho categorical yabazali.
Ngakolunye uhlangothi, kubonakala sengathi yena esebenzisa ithalente abafundi ukuze bafeze imigomo yabo. Kodwa kwazi bani, mhlawumbe kuba. Mhlawumbe yena ngabandayo ngokuphelele izifiso zabo. Futhi uma konke abathembisa, kweqiniso? Phela, uma Dewey Finn uye owazidukisayo. Funda ngakho, ungakwazi kuphela ukubuka ibhayisikobho "School of Rock" kuze kube sekupheleni.
Dzhek Blek got indima abaholayo ifilimu, hhayi kuphela amakhono akhe nokwenza. Ekuphileni okungokoqobo, ukuthi uyabandakanyeka umculo, edlala rock olukhuni D. Ngakho cishe kwakungelula ukujwayela indima.
ukusebenza Musical adalwe umqondisi Richard Linklater, wathola izilinganiso kahle eliphezulu phakathi ifilimu a baxgeki emhlabeni. It behlakaniphe nabayikhulu movie funniest version Bravo siteshi. Phela, naphezu kweqiniso lokuthi abaningi owasebenza movie "School of Rock" abadlali - namanje izingane ngempela, manje omuhle esikalini kanye nabantu abadala.
Adume umqondisi wamabhayisikobho Sergei Ursulyak
Nkulunkulu Apollo - kankulunkulu wamaGreki kwelanga